USukazi akayisoli eyokudayiswa kwamaqembu, ufuna kuqine umthetho
August 17, 2021 Impempe.com
Usihlalo weTS Galaxy, uTim Sukazi, uthi akayiboni nencane inkinga ngokudayiselana ngezitifiketi zokudlala kwiPremier Soccer League (PSL).
Uthi inqobo nje uma kuzolandelwa imigudu efanele uma kudayiselwana. Ukhuluma kanjena nje uSukazi sekuyinto yamasizini wonke ukuthi iqembu elithile lithenge isitifiketi sokudlala kwiDStv Premiership noma kwiGladAfrica
Kuyimanje iRoyal AM ebidlala kwiChampionship, seyithenge isitifiketi seBloemfontein Celtic, ebigijima kwiPremiership.
“Okokuqala nje, ukubheka umuntu ofuna ukuthenga isitifiketi, nomuntu ozimesele ngokudayisa. Lokho yikona okucacisayo isimo sebhizinisi.
“Uma inkampani noma iqembu libhekene nesimo sokuthi lingashabalala noma lidliwe.
“Kodwa uthole ukuthi linayo into elingathi liyayidayisa, njengesitifiketi sePSL, kumele lenze njani?” kubuza uSukazi.
“Ngabe kumele ushone phansi nesitifiketi sakho kuphele kanjalo, noma usebenzisa ithuba lokudayisa isitifiketi sakho?
“Nakanjani wenza lokhu okokugcina (ukudayisa isitifiketi).” USukazi ungene kwiPremiership neTS Galaxy ngesizini edlule ngemuva kokuthenga isitifiketi seHighlands Park.
“Lokhu ngibona kuyinto evikela isithunzi sePSL uqobo ngokuhamba kwesikhathi. Cabanga nje uma kungaba khona iqembu elishabalalayo phakathi nesizini ukuthi kungaba yinkinga enjani.
“Ukugwema lesi simo, labo abathatha izinqumo ngokudayiselana kumele bathathe isinqumo esizovuna amaqembu neligi,” kuchaza uSukazi.
“Angisho lokhu ngoba nakhu iTS Galaxy ingumkhiqizo walokhu kudayiselana kodwa ngisho lokhu ngoba ngicabangela ibhola nebhizininisi.
“Iligi yaseNingizimu Afrika inamaqembu angu-16, ngakho asidingeki isimo lapho kuzothi sekudlalwe
imidlalo eyisishiyagalolunye noma engu-13, uthole ukuthi amaqembu asengu-15.
“Lokho kungabanga izinkinga eziningi kakhulu.” Nokho uSukazi uyavuma ukuthi akumele kube kwamachanca nje kwiPSL.
Uthi kufanele kube nomthetho obekwayo mayelana nokudayiselana. “Nakanjani into okumele siyemukele ukuthi kuzongena amaqembu amasha njalo ngesizini, kungakhathalekile ukuthi athengile noma akhushuliwe ngokusemthethweni.
“Ngokwami kodwa ngingathi kumele uqine umthetho, mhlawumbe kuthiwe umuntu othenge isitifiketi akavunyelwe ukusidayisa ingakapheli iminyaka emihlanu esitholile.
FUNDA NALA: ITTM ingase igijime kwiDStv Premiership kule sizini eqala ngempelasonto
“Lokhu kungenza ukuthi umuntu ofuna ukudayisa isitifiketi acabangisise kahle. Uma umuntu edayisa namuhla bese efuna ukuthenga kusasa yikona okungaba yinkinga lokho.
“Uma udayise manje wazi ukuthi ngeke ubuye kalula nje,” kusonga uSukazi. Ukuthenga kweRoyal AM iCeltic akugcini lapho kuphela njengoba kuvela ukuthi iTshakhuma yona isithenge ilungelelo layo lokudlala kwiChampionship.
ITTM ithenga nje kade idayise maphakathi nesizini edlule abapohathi bekhala ngokuphelelwa yimali. Kodwa manje sekungenzeka babuyele kwiPremiership.
Angithi uma iRoyal AM iliwina icala layo, kuzosho ukuthi isitifiketi sayo sesiyikhomba kwiPremiership.
Usihlalo wePSL, u-Irvin Khoza nethimba lanammeli bale nhlangano bazoba nesithngami nabezindaba ngalokhu ngoLwesibili ekuseni.
Previous Previous post: UNcobo ushaywe amahloni ngamaphutha onompempe kwiMTN8
Next Next post: BUKA: Siyixoxa ngezithombe eyeDundee July